Daandiin Xiyyaaraa Itoophiyaa Addoolessa 17 Asmaraaatti balaliinsa eegaluufi - BBC News Afaan Oromoo
Daandiin Xiyyaaraa Itoophiyaa Addoolessa 17 Asmaraaatti balaliinsa eegaluufi
Daandiin Xiyyaaraa Itoophiyaa jalqabaatiin Asmaraatti balali'u barbaaddu? Akkasi taanaan daandiin Xiyyaaraa Itoophiyaa balaliinsa isaa gara Asmaraatti Adoleessa 17, 2018 eegaludhaaf qophiisaa xumuruu beeksise.
Ibsa Waajjirri Daandii Xiyyaaraa Itoophiyaa baase akka mul'iseetti, tajaajilichi xiyyaarawwan teeknoolojii olaanoodhaan guutaman 'Boeing 787' eegalamu kunis balaliinsa guyya guyyaa waggoottan 20 darbaniif adda citee ture kan eegalchiisudha.
Sagantaa balalinsaatiinis xiyyaarri yeroo tokkoon namoota 150 ol qabatu ramadamu barameera. Kana keessaayis tessumni gara 20tti siquuf imaltoonni galmaa'nsaanii barameera.
Tajaajilli Daandii Xiyyaara kunis waliigaltee ministira mummee Itoophiyaa Dr Abiyyi Ahimad fi Pirezidaantii Eertiraa Isaayaas Afawarqii jidduutti jalqaba torban kanaa taasifameen kan walqabate ta'uu ibsameera.
Hogganaan Daandii Xiyyaara Itoophiyaa Obbo Tawelde Gabremaariyaam waa'ee balaliinsa eegalu ilaalchisuun, ''Daawwannaa ministira mummee Eertiraatiin booda, nutis warri garee daandii qilleensa Itoophiyaa sagantaa balaliinsaa keenyaa waggoota 20'n booda deebiifnee yoo eegallu gammachuu olaanaatu nutti dhagahama,'' jedhaniiru.
Tajaajilli daandii Xiyyaara eegaluun isaas walumaagalatti walitti dhufeenya siyaas-dinagdee uummata biyyoota lamaanii jidduu cimsuuf gahee olaanaa taphatas jedhaniiru, Obbo Tawelden.
Daandiin Xiyyaara Itoophiyaa wayita ammaa kanatti iddoowwan idil addunyaa 114 oli aardiiwwan shan keessatti argamanitti balali'aa jira.
Tajaajilli balaliinsaa Asmaraatti eegaluun hawaasa diyaasporaa Eertiraa addunyaa mara keessa jiraniif carraawwan walitti dhufuu uumuun invastimantii, daldalaafi turizimii gara Eertiraatti dabaluu danda'a jedhu Obbo Tawelden.
Hatattamaanis tajaajilawwan balaliinsaa baay'ee eegaluufi gabaa biyyoota obboloota lamaan jidduu jiraachu malu ilaaluun ammoo tajaajila kaargoo eegaluuf karorfameera jedhaniiru.